Samsung Odyssey G7: mpanara-maso lalao feno | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 21/04/2021 18:00 | General, hevitra
Tamin'ny faran'ny taona lasa dia nanolotra andiana vokatra vokatra ary indrindra ny faritra ny orinasa Koreana Tatsimo Odyssey, ny efijery hanatanterahana an'io tanjona io izay atoron'ny orinasa ho an'ireo mpampiasa mba hahazoany tombony betsaka amin'ny lalao video.
Amin'ity indray mitoraka ity dia eo amin'ny latabatra fitsapana ny vaovao Samsung Oddysey G7, monitor avo lenta avo lenta natao manokana ho an'ny lalao. Jereo miaraka aminay ny fanadihadihana lalina nataony ary fantaro fa mendrika ny fividiananao izany. Lazainay aminao ny hevitray sy ny valiny farany tamin'ny fanadihadianay.
1 Volavola sy fitaovana: Mikendry "gaming"
2 Toetra teknika tontonana
3 Fanitsiana sy fifandraisana
4 Mampiasà traikefa sy fanombanana
Volavola sy fitaovana: Mikendry "gaming"
Raha ny marina, ny fahazarana mampiditra LED RGB marobe amin'ny zava-drehetra izay mikendry ny "filalaovana" dia zavatra tsy mety amiko indrindra, aleoko ny maotina. Na izany aza, Samsung dia nahavita nanohana an'io hevitra io tsy nisy fireharehana loatra ary izany no nahagaga anay. Manomboka amin'ny fandinihana ny iray amin'ireo lafiny mampiavaka azy indrindra isika, ny fiolahana 1000-milimetatra izay fitenenana faratampony amin'ny resaka monitor curved. Izany dia ankoatry ny fampihenana ny sisiny sy ny bezel ambony miaraka amina endrika masiaka eo amin'ny farany ambany, avoakan'ny efijery LED RGB roa isaky ny sisiny.
lanja tontaliny: 6,5 Kg
lafiny hatevin'ny fotony: 710.1 x 594.5 x 305.9 mm
Ao amin'ny rindrina aoriana dia manana fanohanana voaorina tsara isika izay manana mpandalo tariby, ary koa peratra LED RGB indray mandeha, izany dia manana fehezam-bidy izay hampihena ny jiro. Somary manjavozavo amin'ny tranga rehetra io ary tsikaritra indrindra rehefa miresaka momba ny fampiasana azy tanteraka amin'ny maizina isika, dia io no hita taratra amin'ny rindrina. Ny fotony dia azo ovaina amin'ny haavony hatramin'ny 120 santimetatra ary afaka: mihodina eo anelanelan'ny - 9º sy + 13º, ahodina - 15º sy + 15º ary pivot eo anelanelan'ny -2º sy + 92º. Ny monitor dia namboarina voalohany tamin'ny plastika mainty miaraka amin'ny famaranana metaly ho an'ny fahamendrehana.
Toetra teknika tontonana
Manomboka, mazava ho azy, amin'ny tontonana fanaraha-maso izay mety ho tena ilaina indrindra amin'ireo fitaovana be mpampiasa. Manana karazana Tontonana VA 31,5-inch miaraka amin'ny 16: 9 lafiny tahan'ny tena mahazatra. Ity takelaka VA ity sy ny endriny tena miolikolika dia mahatonga azy io hankafy ny famirapiratany farany ambony indrindra rehefa mijoro tsara eo alohany isika, tsy maintsy adinontsika ny fampiasana azy avy eo am-pandriana na avy amin'ireo teboka izay tsy mivantana afovoany. Ao amin'ity monitor ity dia nisafidy ny QLED i Samsung, ny teknolojia nahavita fahombiazana be dia be.
Ny laharam-pahamehan'ny monitor dia 2560 x 1440 teboka, Tsy ratsy velively izany raha afaka mankafy lalao PC manaraka, ary koa ny mifanentana tanteraka amin'ireo fitaovana toa ny PlayStation 5. Manana fahazavana 350 cd / m2 isika izao miaraka amin'ny cd / m600 farafahakeliny 2 amin'ny isa voatondro. Ny tahan'ny fifanoherana dia hatramin'ny 2.500: 1 fa tsy maniry be loatra isika, eny, ny fampifanarahana ny tontonana dia hifanaraka amin'ny NVIDIA G-Sync sy AMD FreeSync mifanentana.
Ny faritra mavitrika atolotray azy, amin'ny tranga HDR600 anao Tokony holazaina fa tsy nahita azy io koa izahay. Ny tahan'ny fanavaozana, eny, no avo indrindra eny an-tsena nefa tsy mihoatra ny ora, mahatratra hatramin'ny 240 Hz. Etsy ankilany, amin'ny 240 Hz dia tsy afaka mampiasa azy io fotsiny isika amin'ny halalin'ny loko 8, mila midina amin'ny 144 Hz maotina isika vao afaka mankafy tontonana 10-bit. Etsy ankilany.
Fanitsiana sy fifandraisana
Ity monitor ity dia manana rafitra rindrambaiko tafiditra hiasa amin'ny alàlan'ny hazavam-pifaliana any ambany. Ao no ahitantsika ny toerana misy azy eo amin'ny haavon'ny fifandraisana sy ny fikirakirana, na dia toa tsy dia nazava loatra tamiko aza izany. Azontsika atao ny miatrika olana hafa momba ny tahan'ny famelomana. Amin'izany dia ho hitantsika amin'ny fotoana tena izy ny "impu-tlag" fa na izany na tsy izany dia mijanona ao anaty 1ms farafaharatsiny mandritra ny fitsapana ataonay.
Miroso amin'ny fifandraisana, hahita port USB 3.0 misy habe roa isika, seranan-tsambo USB Hub mahazatra raha te hanampy karazana fampidirina mahaliana kokoa izahay, ary koa seranana DisplayPort 1.4 roa sy seranana HDMI 2.0. Tsy ho diso anjara na inona na inona mihitsy ianao, raha tsy mitady feo ianao dia hanana output amin'ny headphone fa manadino ireo mpandahateny. Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, Amin'ny alàlan'ny fampidirana port HDMI fotsiny, dia mety hahita snag aza isika rehefa manampy bara fanamafisam-peo hanatsarana ny zavatra niainantsika ankapobeny.
Mampiasà traikefa sy fanombanana
Amin'ny zavatra mahery vaika dia manana tsiro mangidy foana isika. Amin'ity tranga ity dia ny mitia na mankahala no miolakolaka ambony. Ny fiolahana 1000R dia misy dikany betsaka amin'ny monitor toy izany, na dia tsy mbola nisy olona nanandrana azy hatreto. Manarona antsika tanteraka ity efijery ity ary mitazona ny ankamaroan'ny sehatray maso, manana tombony mazava kokoa noho ny milalao. Ny fiheverana voalohany taorian'ny fifandraisana voalohany tamin'ny monitor dia ny tena fahagagana, tsy azo gaga tsy ho gaga.
Vetivety ianao dia zatra izany, indrindra rehefa tsy hampiasa azy io akory vao milalao. Rehefa mikasa ny hiara-hiasa aminy ianao dia miova ny raharaha ary misy izany noho io antony io, nampiana ny curvature radical-ny, izay monitor tsy dia be loatra, tena natao ho an'ny tanjony, «gaming». Ny fanitrihana dia tanteraka, saingy natao ho an'ny besinimaro gamer fotsiny izy io. Na izany aza, toa sarotra ny fananana mpanara-maso roa amin'ity habe ity amin'ny birao, ka tokony hazava tsara ny vidiny rehefa manapa-kevitra ny hampiasa izany amin'ny tanjona hafa ianao, satria ny fijerena sarimihetsika amin'ny toerana misy ny lalao dia mety tsy ho ahazoana aina indrindra.
Raha mbola nanao ny famakafakana izahay dia nanamarina fa namoaka fanavaozana firmware ho an'ny monitor i Samsung, ity dia napetraka mora foana amin'ny alàlan'ny port USB misy azy ary manome famantarana tsara ny fanohananana izay ao aoriany. Na izany aza, hadalana tokoa ny vidiny, ho an'ireo izay te hampiasa tsara ny fahaizany ihany amin'io lafiny io,Samsung G7 (C32G73TQSU) ...
Ity no fanadihadianay lalina momba ny Odyssey G7 an'ny Samsung, mpanara-maso izaitsizy indrindra sy mahery vaika indrindra ho an'ireo mpilalao indrindra, tadidio fa afaka mamela anay hametraka fanontaniana aminay ao anaty boaty maneho hevitra ianao
Navoaka tamin'ny: 21 Aprily 2021
Fanovana farany: 18 Aprily 2021
Fiolahana tena mahery vaika
Fifanarahana ambony sy tahan'ny famelombelona
Fanohanana ara-teknika sy famolavolana tsara
Seranan-tsambo maro hafa no tsy hita
Vidiny mora tratran'ny vitsy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Samsung Odyssey G7: mpanara-maso lalao iray tena feno
Tovovavy ofisialy amin'ny Andro ICT: Miresaka amin'i Fran del Pozo izahay, avy amin'ny Code.ORG